Shirkii Madaxda Maamul Goboleedyada oo ka furmaya Dhuusamareeb | Keydmedia
Shirkii Madaxda Maamul Goboleedyada oo ka furmaya Dhuusamareeb
Shirka oo lagu waday inuu shalay 9-ka July ka furmo Dhuusamareeb ayaa farsamo ahaan dib u dhacay markii ay xilli danbe magaalada gaareen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Waxaa maanta oo Sabti ah magaaladda Dhuusamareeb ka furmaya Shirka Madaxda Maamullada, kaasoo la filayay inuu billowdo Khamiistii, balse dib u dhac ku yimid cilado farsamo awgood.
Shalay oo Jimce ahayd ayaa la isla gartay inay noqoto nasasho iyo is-aragyo kala gaar ah, oo ay yeesheen madaxda shanta Maamul Goboleed, iyadoo Sabtida maanta ah lagu balamay inuu si rasmi ah u furmo shirka, oo indhaha lagu wada haya, islamarkaana laga rajeynayo go'aanno wax ku ool ah inay kasoo baxaan.
Kulanka ayaa looga hadlayaa dejinta ajendayaasha shirka iyo sidii ay u wajihi lahaayeen arrimaha horyaalla, gaar ahaan muranka ka taagan doorashooyinka dalka Soomaaliya, oo Madaxda Dowladda ay sheegeen inay waqtigii loogu tala-galay ay dhici doonaan.
Waxay Galmudug sheegtay in Shirka noqon doono mid mira-dhal ah, oo laga soo saari doono mowqif mideysan oo ku aadan xaaladda dalka ka jirta iyo sidii wax looga qaban lahaa is-mariwaa taagan, ee la xiriira arrimaha doorashooyinka, wadaagga khayraadka iyo dhameystirka Dasruurka.